तिलोत्तमाका किसानलाई कृषि उपकरण सहयोग - Mechikali News
तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सञ्चालित व्यवसायिक आलु उत्पादन, बीज वृद्धि तथा व्यवसायिक तरकारी खेती परियोजनाले किसानलाई विभिन्न कृषि उपकरण सहयोग गरेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यु.एन.डी.पी.) र प्रगतिशील महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सहकार्यमा यो परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ ।
उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले उपलब्ध गराइएका कृषि उपकरणको सदुपयोग गरेर उत्पादन क्षमता बढाइनुपर्नेमा जोड दिँदै नगरपालिकाले किसानको हीतका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चान गरेको बताइन् । यु.एन.डी.पी. का लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रमुख सुदीप अर्यालले किसानको आवश्यकता र प्रयोगको औचित्यका आधारमा नगरपालिकाको समन्वयमा अन्य किसानलाई समेत कृषि उपकरणमा सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारे । कृषि उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु, सहकारीकी अध्यक्ष सीता न्यौपाने, व्यवस्थापक जमुना गिरीलगायतले परियोजना अन्तर्गत भएका कामहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकामा गत वर्षदेखि व्यवसायिक आलु उत्पादन, बीज वृद्धि तथा व्यवसायिक तरकारी खेती परियोजना सुरु गरिएको हो । परियोजनाअन्तर्गत् गत वर्ष झण्डै ६५ बिगाहामा बीज वृद्धिको लागि आलु खेती गरिएको थियो । उत्पादित आलु यो वर्ष बीउको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी शीतभण्डारमा राखिएको छ । परियोजनामार्फत् तिलोत्तमा नगरपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाइने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेको भनाइ छ ।